စိတ်ကစားတဲ့မမသူမနာမည်ကဇင်မာဝင်း။ အသက် ၁၉ နှစ်ခန်.၊ ဆယ်တန်းအောင် ပြီး တက္ကသိုလ် တက်ရန်စောင့်နေသူဖြစ်သည်။ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က တောင့်တောင့် တင်းတင်း ရှိသည်။မို.မို.မောက်မောက် ရင်သားများနှင့် စွင့်ကားသောတင်ကလည်း မြင်ရသူစွဲမက်ချင်စရာပင်။ ဇင်မာ မိဘ များကနယ်တွင်ရှိ ၍ ဇင်မာကရန်ကုန် တွင်အဒေါ်ဖြစ်သူနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနေ.ဇင်မာ အိမ်တွင် တယောက်တည်းရှိနေ ရှန်သားရှပ်အကျီ ပါးပါးကလေးနှင့် ဒူးတ၀က်လောက်ရှိသော ကျောင်းစိမ်း စကတ် ပါးပါး လှပ်လှပ်ကလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပါသည်။ စကတ်ကလေးမှာ ခါးတွင်သားရေကြိုးရှုန်.ကလေးနှင့် ကားကားလေးဖြစ်ကာ အဟောင်းကလေးဖြစ်၍ ပါးလှပ်လွန်းလှပါသည်။ဇင်မာအိမ်ရှေ.ခန်းတွင်စာဖတ်နေရာမှ ညောင်းလာ၍ အိမ်နောက်ဖေးလှေကာရင်းသို.ထွက်လာရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်ကွင်းတခုကိုတွေ.လိုက်ရပါသည်။ဇင်မာတို.အိမ် ဟိုဘက်ခန်းတွင်နေသော ကိုမျိုး၊ ဘောလုံးကန်ရာမှ ပြန်လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။စွတ်ကျယ်လက်ပြတ် နှင့် ဘောင်းဘီတို နှင့်။ခြေထောက် ဆေးနေရင်း နှင့်ညာလက်က ပေါင်ကြားကိုအုပ်ကိုင်ထားသည်။ပေါင်ကြားက လီးနေရာကို လက်နှင့်အုပ်၍ ဆုပ်နယ်နေသည်။ထူးဆန်းသောမြင်ကွင်းကြောင့် ဇင်မာ စိတ်ဝင်စားမိသည်။ကိုယ် ကို ရေစည်ပိုင်း နှင့်ကွယ်၍ ဆက်ကြည့်နေမိသည်။ ကိုမျိုးက ဘောင်းဘီခွကြားမှသူ.လီးကိုအပြင် ကိုအသာထုတ်လိုက်၍ လက်နှင့်ပွတ်သတ်နေသည်ကိုဇင်မာတွေ.မြင်နေရပါသည်။ယောင်္ကျားလေးတယောက် ဂွင်းတိုက်၍ စိတ်ဖြေနေတော့မည်.မြင်ကွင်းကိုတွေ.မြင်နေရ ရာဇင်မာစိတ်များလှုပ်ရှားလာလေသည်။ကိုမျိုးကဘောင်းဘီတို ဂွကြားမှလီးကိုထုတ်ကာလက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ရင်းစိတ်ဆွနေရာ ကိုမျိုးလီးကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခြင်းကို ဇင်မာမြင် တွေ.နေရပါသည်။ဇင်မာ စိတ်တွေလှုပ်ရှားကာ ရင်ထဲတွင်လည်း တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေပါတော့သည်။ပါးလွှာသော စကတ်အဟောင်းလေးအတွင်းမှ ဇင်မာ စောက်ဖုတ်ကလေးကလည်းတင်းမာဖောင်းကြွလာပါတော့သည်။ဇင်မာ ကာမဆန္ဒများထကြွလာပါတော့သည်။တောင့်တင်းနေသော ကိုမျိုး၏လီးတန်ကြီးကိုလည်းမြင့်တွေ.နေရပါသည်။ကိုမျိုးကလီးကိုညာလက်ဖြင့်ဆုပ်ရင်းတချက်ချင်းမှန်မှန်ဂွင်းတိုက်နေပါသည်။ဇင်မာမြင်ကွင်းကိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်ရင်းမိမိလက်ဖြင့်ပါးလွှာသောကျောင်းစိမ်းစကတ်လေးပေါ်မှစောက်ဖုတ်ကိုပွတ်သပ်နေမိပါသည်။ပါးလွှာသောစကတ်လေးနှင့်ဇင်မာကာမဆန္ဒများထကြွနေပါတော့သည်။...အအအ ...အား.. ----အ ကိုမျိုးပါးစပ်မှအသံလေးတွေထွက်ရင်းလက်ကလည်းခတ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားလာပါသည်။အီး.....အီး မမဇင်မာ..အ.မမဇင်မာ..ကိုမျိုးပါးစပ်မှမိမိနာမည်ကိုရေရွတ်ရင်းဂွင်းတိုက်နေရာဇင်မာပို၍စိတ်များတက်ကြွလာပါတော့သည်။အီး..မမဇင်မာ..စကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ထားတယ်...အ.အား..အား..စကတ်ပါးပါးလေးနဲ...စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.အား..ဇင်မာစိတ်တွေအရမ်းလှုပ်ရှားလာတယ်။ အိမ်နေရင်းလွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာဝတ်ဆင်တဲ့စကတ်ကလေးကိုလည်းကိုမျိုးကဂွင်းတိုက်ရာတွင်ရေရွတ်နေသည်။ဇင်မာစကတ်ပါးလေးဝတ်တာကိုဘယ်တုန်းကကြည့်နေတယ်မသိဘူး၊ ကိုမျိုးကတော့ မမဇင်မာ.....စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.စသည်ဖြင့်အဆက်မပြတ်ရေရွတ်ရင်းမြန်မြန်ကြီးကိုဂွင်းတိုက်နေတယ် ၊အ အ အအီး ပြီးတော့မယ် ၊အ အအ အ ပြီးတော့မယ်မမ ဇင်မာ…. ပြီးတော့မယ် အ အီး အား အား.. စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.အား..ပြီး..တော့း....... အား စ .... ကတ်...ပါး.....ပါး...လေး... အား... ကိုမျိုးပါးစပ်မှရေရွတ်ရင်းအဆက်မပြတ်ဂွင်းတိုက်နေမှုကိုဇင်မာ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေရင်း မှာ ပင် ကိုမျိုးလီးမှ သုတ်ရည်များပန်းထွက်လာသည်ကို မြင်တွေ.လိုက်ရပါတော့သည်။
အား.. အာ.. အား...ကိုမျိုးတဆတ်ဆတ်တုန်၍အရ သာအရမ်းရှိနေသည်ကိုဇင်မာမြင်တွေ.ရပြီးနောက်ကိုမျိုးကလီးထိတ်တွင်ပေနေသော လရည်များကိုဘောင်းဘီတိုနှင့်သုတ်၍ လီးကိုဘောင်းဘီတိုအတွင်းပြန်သွင်းကာအိမ်ထဲသို.၀င်သွားပါတော့သည်။ အဖြစ်အပျက်ကိုအစအဆုံးမြင်တွေ.လိုက်ရသူဇင်မာမှာတော့ စိတ်မောစွာဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့သည်။ ဇင်မာအိမ်တွင်းသို.ပြန်ဝင်လာပြီးအိပ်ရာပေါ်တွင်လှဲလိုက်ပြီးမြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းအားမျက်စိထဲမှမထွက်နိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။ ဇင်မာ မှာအသက်လည်းငယ် ၊ သွးသားကလည်းဆူဖြိုးသည့်အရွယ်မို.ကာမဆန္ဒများပြင်းထန်လာပါတော့တယ်။ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးကိုသာဝတ်ဆင်ထားရာပို.လို.ပင်စိတ်များတက်ကြွလာပါတော့တယ်။ ဇင်မာ့လက်ကလေးက ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးပေါ်မှစောက်ဖုတ်ကလေးကိုပွတ်နေမိပါတော့တယ်။ စောက်ဖုတ်ကလေးအတွင်းမှထွက်နေသောစောက်ရည်ကြည်ကလေးများကစကတ်ပါးပါးကလေးကိုစိုစွတ်နေပါတော့တယ်။ ဇင်မာ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးပေါ်မှ စောက်ဖုတ်ကလေးကိုလက်ညိုးကလေးနှင့်ထိုးပွတ်နေရင်းပါးလွှာသောစကတ်စကလေးကိုပါစောက်ဖုတ်အတွင်းသို.ထိုးသွင်းလှုပ်ရှားနေမိပါတယ်။အ..အ..စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများပွင့်လာပြီးစောက်စိကလေးကလည်းတင်းမာလာပါတယ်။အ....အား ကိုမျိုး အား ကောင်းလိုက်တာ... အား အား ကိုမျိုးရယ် လက်တဖက်ဖြင့်ရှန်သား အက်ျီကြယ်သီးကလေးတွေကိုဖြုတ်နေပါတယ်။အားအား... ကိုမျိုးရယ် ဇင်မာလုပ်နေပြီ ၊ အား ..လက်တဖက်ဖြင့်ဘရာဇီယာကလေးကိုအပေါ်သို.ဆွဲလှန်တင်ရင်း နို.တွေကိုဆုပ်နယ်နေပါတယ်။ အား... ကိုမျိုးရယ် ကောင်းလိုက်တာ..... အ.. စကတ်လေးပေါ်ကလက်ခလယ်လေးနှင့်စောက်စိကိုပါမကျန်ခပ်မြန်မြန် ကြီးပွတ်နေပါတော့တယ် ။အား အား ဇင်မာအရမ်းကိုကောင်းလာတော့လက်ကို ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးထဲ ကိုထိုးသွင်းလိုက်ရင်းစောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကလေးကိုပါပွတ်သပ်နေတယ်။ဇင်မာစောက်ဖုတ်ကထွက်နေတဲ့စောက်ရည်တွေကလည်း ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးကို အကွက်ကလေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။ အရဲစွန်.၍ဇင်မာလက်ခလယ်လေးကိုစောက်ဖုတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်တယ်။အ..အ.အ ၀င်သွားပြီ . .လက်ခလယ်လေးကဇင်မာစောက်ဖုတ်ထဲမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက် နှင့်လှုပ်ရှားနေပါတော့တယ်။လက်ခလယ်ဖြင့်အသွင်းအထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ ပွတ်ခြင်းထက်အဆပေါင်းများစွာကောင်းမွန်သောအရသာကိုခံစားရပါတော့တယ်။အား-----အီး-------အိုး ကောင်းလိုက်တာ------- အိုး---- ဇင် မာ .. ကောင်းနေ ပြီ အား-----ဇင်မာအရမ်းကောင်းနေပါပြီ။အိုး------- ကိုမျိုး ကိုမျိုး ကိုမျိုး ကိုမျိုး အား------------- ဇင်မာကောင်းနေပြီဇင်မာကောင်းနေပြီ အား-------- ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး အား----အား ပြီးတော့မယ် - ---- --- -- ပြီးတော့မယ် အား --- စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. ----စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.လုပ်နေတာ----အား ------ ကိုမျိုး -----ဇင်မာပါးစပ်မှတတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်းလက်ကလည်းစောက်ဖုတ်အတွင်းမှာ မြန်မြန်ကြီးလုပ်နေ ပါတော့တယ် ----- အား မမ ပြီးတော့မယ် အား--------ပြီးတော့မယ် ........ အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. ---စ -------ကတ်------- ပါး---------------ပါး----------လေး--------------အား--------------အား----- ဇင်မာတကိုယ်လုံးတုန်တက်လာပြီး စောက်ဖုတ်အတွင်းမှစောက်ရည်များပန်းထွက်လာကာပြီးဆုံးခြင်းသို.ရောက်သွားပါတော့တယ်။ ဇင်မာ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးနဲ.စောက်ဖုတ်ကိုသုတ်လိုက်ပါသည်။ထိုစဉ်--------------
ဇင်မာ ညီမလေး ဘာလုပ်နေတာလဲဟင် မမငယ်မမငယ်ကဇင်မာအမတ၀မ်းကွဲဖြစ်ကာရန်ကင်းတွင်နေထိုင်လေသည်။အိမ်ရှေ.တံခါးကိုဖွင့်ထားမိသဖြင့်ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။မမငယ် ကဇင်မာတို.အိမ်ကိုဝင်ထွက်နေကြဖြစ်သည်။ဇင်မာ ကဒါတွေတောင်လုပ်တတ်နေပြီပေါ့လေဇင်မာ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးကိုကပျာကယာဆွဲဖုံးလိုက်ရင်းဟို—ဟို--- စိတ်မထိန်း---နိုင်--မမငယ်ကဇင်မာ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး မှာပေနေသောစောက်ရည်အကွက်လေးများကိုကြည့်ရင်းဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်------ဟီ ဟီ ဟီ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးနဲ.အော်ပြီး ဇင်မာလုပ်နေတာ ကိုမမမြင်ရတယ်ဇင်မာရှက်ရွံစွာဖြင့်ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဇင်မာ စကတ်လေးကပါးပါး လေးပဲကွာ မမငယ်ကပြောပြာဆိုဆိုဇင်မာကုတင်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်းဇင်မာစကတ်လေးပေါ်မှဇင်မာပေါင်လေးတွေကိုစတင်ကိုင်တွယ်ပါတော့တယ်။မမဘာလုပ်တာလဲ---မလုပ်ပါနဲ.ငြင်းမယ်တော့မကြံနဲ.နော်----လူကြီးတွေနဲ.တိုင်ပြောလိုက်မယ်—ဟီဟီ မမ ဇင်မာတောင်းပန်ပါတယ်—မလုပ်ပါနဲ.တိတ်တိတ်နေစမ်း ငြိမ်ငြိမ်ခံစမ်း မမငယ်ကပြောပြောဆိုဆို ဇင်မာပေါင်ကြားမှစောက်ဖုတ်လေးကိုကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ပေါ်မှ လက်နဲ.မြန်မြန်ကြီးပွတ်နေပါတယ်။--- မလုပ်ပါနဲ.မမရယ် ငယ်ငယ်ကတော့ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေး ပေါ်မှဇင်မာစောက်ပတ်လေးကိုသာလက်နှင့်ခပ်မြန်မြန်လေးပွတ်ပေးနေပါသည်။ ဇင်မာ စိတ်သွင်းထားစမ်း--နင့်ကိုလုပ်ပေးနေပြီ ငယ်ငယ်ကဇင်မာစကတ်လေးကိုဆွဲလှန်၍ဇင်မာစောက်ဖုတ်ကိုလက်နှင့်ပွတ်သပ်ပေးနေပါသည်။ ငယ်ငယ် လက်ကဇင်မာနို.တွေကိုလည်းအားရပါးရဆုပ်နယ်နေပါတယ်။ ဇင်မာ စိတ်သွင်းထားစမ်း-- ငါလုပ်တာကောင်းတယ်မလား ငယ်ငယ်လက်ညိုးတချောင်းကဇင်မာစောက်ဖုတ်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်လက်တဖက်ဖြင့်စောက်စိလေးကိုပွတ်နေလိုက်ပါတယ်။ အား--- --အား------ ငယ်ငယ်ကလက်ညိုးကလေးဖြင့်ဇင်မာစောက်ပတ်ထဲမှာမွှေနှောက်နေပါတယ်။ဇင်မာတခါမှမခံစားရဘူးတဲ့အရသာကိုခံစားရင်းစိတ်များပြင်းထန်လာပါတယ်။ ဟီဟီ စိတ်ကိုတင်းထားစမ်း နင့်ကိုလုပ်ပေးနေပြီဇင်မာလည်းမိမိလက်ဖြင့်လုပ်ခြင်းထက်အဆပေါင်းများစွာကောင်းမွန်သောအရသာကိုခံစားလာရသဖြင့်မမငယ်ကိုကျေးဇူးတင်လာမိသည်။ မမငယ်လက်ညိုးလေးကဇင်မာစောက်ပတ်ထဲတွင်ဘေးတိုက်ရမ်းခါလှုပ်ရှားလိုက်အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက် စောက်ပတ်ထဲကိုလက်ညိုးတဆုံးသွင်း၍ကပ်ညှောင့်လိုက် နှင့် ဇင်မာကိုအစွမ်းကုန်ပညာပြနေပါတယ်။ ဇင်မာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးကလည်း ဇင်မာခါးပေါ်မှာလန်တက်နေပါတယ်။မငယ်ကဇင်မာ ကိုလုပ်ပေးနေရင်းက ကဲ ဇင်မာလေးဘက်ထောက်လိုက်စမ်း ဟုတ်ပြီ----မျက်နှာကိုခေါင်းအုံးမှာအပ်ထား---- ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ထားလိုက်စမ်း လုပ်လေမြန်မြန်လုပ်စမ်း ဟုတ်------ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ဇင်မာမမငယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ပေါင်ကိုနည်းနည်းကားလိုက်---ဟုတ်ပြီ-- ကဲ စကတ်လေးကိုလှန်ပါ မမလေးရှင့်--- ကျွန်မရှင့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးပါတော့မယ်—ဟီဟီထို.နောက်မမငယ်က ဇင်မာစောက်ဖုတ်လေးထဲကို လက်ညိုးနှင့်လက်ခလယ် ကိုထိုးသွင်းလိုက်ရင်းခပ်သွက်သွက်လုပ်ပေးပါတော့တယ်။ အီး----အား မမငယ်----အ လက်ညိုးနှင့်လက်ခလယ် နှစ်ခုပူးနှင့် ငယ်ငယ် က ဇင်မာကိုလုပ်နေတယ်။ ဇင်မာဖင်ကြီးတွေကိုလည်းလက်နှင့်ဆုပ်နယ်ပေးနေတယ်။ ဇင်မာ စိတ်သွင်းထားစမ်း-- အော်စမ်း
ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး လို. ဟဲ့ ----အော်လေ--ကောင်မ အီး--အီး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး--ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး---အား ဟုတ်ပြီ- ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.ဇင်မာကိုလုပ်ပေးနေတယ်---အရမ်းကောင်းနေပြီအီး အီး မမ အား ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အားမမ မမ ဇင်မာ စိတ်ကိုသွင်းထား ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ----- စကတ်ပါးပါးလေး---ဆက်တိုက်အော်ထားမမလုပ်ပေးနေတယ်------- ဇင်မာလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အရမ်းကောင်းနေပြီ---- အား အား အီးစကတ်ပါးပါးလေးနဲ. အား မမ မမ မမ အား ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.အီး အား မမ ပြီးတော့မယ် အား-------- ပြီးတော့မယ် ........ အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.အီး ဇင်မာ ဇင်မာကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.ဇင်မာကိုလုပ်ပေးနေတယ်--- ဇင်မာ ဇင်မာ အား အား ပြီးခါနီးပြီ အား မမ မမအား ဇင်မာ ထွက်တော့မယ်----- ထွက်----------------တော့---------------------မယ် အား---------------အား မမ ပြီးတော့မယ် အား-------- ပြီးတော့မယ် ........ အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. ---စ -------ကတ်------- ပါး---------------ပါး----------လေး-------------- အား--------------- ဇင်မာ --------------------ပြီး---------------- လိုက် ----- ------ ---- တော့ အား စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး အား------------စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး--------------------မမမမမမမမမမမမမ အား--------------------------- ထွက်--------------------------------ပြီ-----------------------စကတ်ပါးပါးလေး စကတ်ပါးပါးလေး အား----------------------- ဇင်မာတကိုယ်လုံးတုန်တက်လာပြီးစောက်ဖုတ်အတွင်းမှစောက်ရည်များပန်းထွက်လာကာ ကျေနပ်မှုအပြည့်ဖြင့် ပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ ဟီ ဟီ ဟီကောင်းလားဇင်မာလေး အရမ်းကောင်းတယ်မမ ရယ် ကဲဇင်မာ မမငယ်ကိုတလှည့်လုပ်ပေးဦးလေဘာလဲ လုပ်မပေးချင်တော့ဘူးလားလုပ်ပေးပါမယ်မမငယ်ရယ်------ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသာပြောပါအိုကေ အိုကေငယ်ငယ်ကသူမ၀တ်ဆင်ထားသောဘလောက်စ်အင်္ကျီလေးကိုချွတ်လိုက်ပါသည်။ ဘရာဇီယာချိတ်များကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးနောက်သူမ၏နို.ကြီးနှစ်လုံးမှာကြီးထွားလှပါသည်။ကဲ ဇင်မာ နို.တွေကိုလက်နဲ.ဆုပ်ပေးစမ်း-- နာနာလေးညှစ်ပေးအင်း---ဟုတ်ပြီ--- နို.အုံ.တွေကိုလက်နဲ.ဆုပ်ချေပေး----- အား ဟုတ်ပြီဇင်မာလည်း ငယ်ငယ်နို.တွေကိုလက်နဲ.ဆုပ်ချေရင်း နို.သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညိုး လက်မနှင့် ပွတ်ချေပေးပါသည်။အား ကောင်းလိုက်တာ -----နို.သီးခေါင်းလေးတွေတောင်လာပြီဇင်မာ နို.စို.ပေးစမ်းပါ--- လုပ်ပါ---ငယ်ငယ်ကတဏှာသံပြင်းပြင်းနဲ.အတူ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ဇင်မာ ငယ်ငယ်ရဲ.နို.တွေကိုခပ်ပြင်းပြင်းစို.ပေးလိုက်ပါသည်။အား ကောင်းလိုက်တာ အားရ ပါးရစို.စမ်းပါ နာနာလေးစို.ပေး--ဇင်မာ မမငယ်၏နို.တွေကိုစို.ပေးရင်းမှ လက်တဖက်ဖြင့်မမငယ် ခါးမှထမိန်ကိုဖြေလိုက်ပါသည်။ မမငယ်ဖင်ကိုကြွရင်းထမီကိုအောက်သို.လုံးဝဖြေချလိုက်ပါသည်။ မမငယ်ကအတွင်းခံစကတ်ပါးပါးကလေးတထပ်တည်းကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးစောက်မွှေးများကလည်းထူထပ်စွာပေါက်နေပါတယ်။
ဇင်မာ ငါ့စောက်ဖုတ်လေးကို ကိုင်လေ---အင်း ဟုတ်ပြီ ပွတ် ပွတ်...အား ကောင်းလိုက်တာဇင်မာ လက်ကို မမငယ်အတွင်းခံစကတ်ပါးပါးထဲကိုသွင်းလိုက်ရင်းမမငယ်စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုထိုးပွတ်ပေးနေပါတယ်။အား ဇင်မာ ဇင်မာ အား အားဇင်မာ ငါ့စောက်ပတ်ကိုယက်စမ်း ------ယက်ပေးစမ်းပါငယ်ငယ်ကပြောပြောဆိုဆိုကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်ချလိုက်ရင်းအတွင်းခံစကတ်ကိုအပေါ်ကိုဆွဲလှန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ယက်ပါ ဇင်မာရယ် ငယ်ငယ်က သူ.လက်နှင့်သူ.စောက်ဖုတ်ကိုပြန်လုပ်နေရင်းအား ယက်ပေးပါ ----ကဲ မမငယ်ပေါင်ကားပေး သမီးယက်ပေးမယ်ဇင်မာ မမငယ်ပေါင်ကြားထဲကိုခေါင်းဝင်လိုက်ရင်း မမငယ်စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုလျှာနဲ.စတင်ယက်ပေးပါတယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကလည်းမမငယ်နို.တွေကိုတင်းတင်းဆုပ်ချေပေးရင်းလျှာနဲ.ငယ်ငယ်စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက်စောက်စိလေးပါမကျန်ယက်ပေးနေပါတယ်။အား ကောင်းလိုက်တာ ဇင်မာရယ်အီး ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ အီး ဇင်မာ ရယ် အားငယ်ငယ်စောက်ဖုတ်အတွင်းမှထွက်လာသောအရည်များနှင့်စောက်ပတ်မှာစိုရွှဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇင်မာ လည်းစေတနာပါပါဖြင့်ငယ်ငယ်စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေး နှင့်စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုအားရပါးရယက်ပေးပါတယ်။ငယ်ငယ်လည်းအရမ်းကောင်းလာပြီးဇင်မာခေါင်းကိုမိမိလက်နှစ်ဘက်ဖြင့်စောက်ဖုတ်နှင့်ဆွဲကပ်ကာယက်အားပိုမိုကောင်းစေရန်နှင့်ပိုပြီးအရသာရှိစေရန်ဖင်ကြီးကိုပါလှုပ်၍ကော့ကော့ပေးနေပါတယ်။အား ကောင်းလိုက်တာ ဇင်မာ ယက်------ယက်------- မရပ်နဲ.အီး-----------အူး--------ရှီး----------ရှီး ကောင်းလိုက်တာ အား----------------မရပ်နဲ.-------မြန်မြန်လေး ---------အား စောက်ပတ်ထဲမှာအရမ်းကောင်းလာပြီ------- မရပ်နဲ. မရပ်နဲ. အား----ဇင်မာ-------ပြီးတော့မယ်-----------အား အား ထွက်-----------------------တော့-------------------------------မယ်--------အား---------------------မ---------ရ--------တော့---------------ဘူး-------အ-----ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အား------------အား------------ငယ်ငယ်တကိုယ်လုံးတွန်.လိမ်၍စောက်ဖုတ်အတွင်းမှစောက်ရည်များပန်းထွက်လာကာငြိမ်ကျသွားပါတယ်။အရမ်းကောင်းလားမမငယ်အင်း ကောင်းတာပေါ့ ဇင်မာရယ်—စောက်ဖုတ်အယက်ခံရတယ်ဆိုတာပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတယ်မမ အမောပြေရင်ဇင်မာစောက်ဖုတ်ကိုတလှည့်ယက်ပေးပါနော်ဟာ---မမသွားစရာလေးရှိသေးလို.ပါ နောက်တခေါက်မှနော်ဟင်--- မမကလည်း--ဆောရီးနော်----ဇင်မာကလိမ်မာပါတယ်---နောက်တခေါက်ကျရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ယက်ပေးမယ်နော်အင်း ပြီးရော
မမငယ်လည်းသူ.အ၀တ်အစားများကိုပြန်လည်ဝတ်ဆင်ကာပြန်သွားပါတော့တယ်။ဤသို.ဖြင့်ယခုတင်ပြသောဇတ်လမ်းတွင်မင်းသမီးဖြစ်သော ဇင်မာဝင်းမှာစောက်ပတ်အယက်ခံချင်စိတ်များပြင်းထန်စွာဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့သည်။နောက်တနေ.၀ယ်စောက်ရည်များပေသွားသော ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးကိုဇင်မာလျှော်ဖွတ်၍အိမ်နောက်ဖေးတွင်လှန်းထားလိုက်ပါသည်။ အချိန်မှာ ညနေ၃း၃၀ ခန်.ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။နေ.လည်တရေးအိပ်ရာမှနိုးလာသောကိုမျိုးသည်နောက်ဖေးဘက်သို.ထွက်လာရာဇင်မာဝင်း၏ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး လှန်းထားတာကိုတွေ.လိုက်ရပါသည်။ဇင်မာဝင်းအိမ်နေရင်းဝတ်ဆင်သည့် ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးကို ကိုမျိုးသတိထားမိသည်မှာကြာပါပြီ။ပါးလျှသောချည်သားကလေးနှင့်ချုပ်လုပ်ထားပြီးလျှော်ဖန်များ၍အဟောင်းလေးလည်းဖြစ်သောကြောင့်နဂိုကပါးရတဲ့အထဲမှာပို၍ပင်ပါးလှပ်နေပါတော့သည်။ထို ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးကိုဇင်မာဝတ်ဆင်ထားသည်ကို ကိုမျိုးမြင်တွေ.ရဘူးပါသည်။ နေရောင်နှင့်စကတ်ပါးပါးလေးအောက်မှဇင်မာ့ပေါင်တန်တွေကိုလည်းတွေမြင်ရဘူးပါသည်။ ဤမြင်ကွင်းများကြောင့် ကိုမျိုးလီးတောင်ခဲ့ရသည်မှာလည်းအခါခါပင်။ အိမ်သာထဲတွင် (သို.မဟုတ်) အိပ်ရာထဲတွင် ဤဲမြင်ကွင်းများကိုမြင်ယောင်ရင်း ကိုမျိုးအကြိမ်ကြိမ်ဂွင်းတိုက်ခဲ့မိပါသည်။ ယခုလည်း ကိုမျိုးသဘောကျသောဇင်မာ ရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကိုတွေ.မြင်နေရရာ ကိုမျိုးလီးတောင်လာပါသည်။ ကိုမျိုးလီးကိုပုဆိုးပေါ်မှအုပ်ရင်းဂွင်းတိုက်နေမိပါတယ်။ဂွင်းတိုက်နေရင်းဖြင့်ကိုမျိုးစိတ်ဝယ်ဇင်မာစကတ်လေးကိုကိုင်တွယ်ကြည့်ချင်စိတ်များပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။လူအရိတ်အခြေလည်းရှင်းနေသဖြင့်ကိုမျိုးဇင်မာရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကိုလှမ်းယူလိုက်မိပါတယ်။ပါးလွှာပျော့ပျောင်းတဲ့စကတ်လေးကိုလက်ထဲတွင်ကိုင်လိုက်ရလျင်ပဲ ကိုမျိုးလီးကမနေနိုင်အောင်ပင်တောင့်တင်းလာပါတော့တယ်။ ကိုမျိုးလူအရိတ်အခြေကိုကြည့်၍ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ကာရေစည်ပိုင်းဘောင်ပေါ်တွင်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး နဲ.ကိုမျိုးလီးကိုပွတ်တိုက်လိုက်ရလျင်ပဲလီးကအလွန်သဘောကျစွာဖြင့် အရည်ကြည်ကလေးများပင်ထွက်လာပါတော့တယ်။အား အား စကတ်ပါးပါးလေးအား အား-----အီး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး နဲ. အား အား အားအူး အူး အီးကိုမျိုး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ စကတ်လေးကိုဝတ်ကြည့်ချင်စိတ်များထိန်းမရအောင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ကိုမျိုး ဇင်မာရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကိုဝတ်ဆင်လိုက်မိပါပြီ။စကတ်ပါးပါးလေးပေါ်က လီးကိုလက်နှင့်ဆုပ်ပြီး ကိုမျိုးမှန်မှန်ကြီးဂွင်းတိုက်နေပါတော့တယ်။အား အား ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အား ဇင်မာဝင်း ဇင်မာဝင်း ဇင်မာဝင်းအားအီး ကောင်းလိုက်တာ ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးအား ငါ ၀တ်ထားတယ် ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.ဂွင်းတိုက်နေတယ် အား အား အားကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးငါဂွင်းတိုက်နေတယ် ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးငါဂွင်းတိုက်နေတယ်အား အား ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အားအီး---------ပြီးတော့မယ်-----------------အားဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဇင်မာဝင်းရဲ.ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး
ဇင်မာဝင်းရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးငါဂွင်းတိုက်နေတယ်ဇင်မာဝင်းရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးငါဂွင်းတိုက်နေတယ်ဇင်မာဝင်းရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးငါဂွင်းတိုက်နေတယ်ဇင်မာဝင်းရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးငါဂွင်းတိုက်နေတယ်ဇင်မာဝင်းရဲ. ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးငါဂွင်းတိုက်နေတယ်အား အ အအ အ အ အ အ အ အအ အား ထွက်------တော့---------မယ်-------အ အ အ အ အအအား---------------------ထွက်----ပြီ ထွက်ပြီ အား-----------------------------အား-------------------ကိုမျိုးလီးမှ လီးရည်များထိန်းမရတော့ပါ။ထိုမြင်ကွင်းကိုအစအဆုံးမြင်လိုက်ရသူတယောက်မှာတော့----------မြင်ကွင်းသည်ဇင်မာကိုအလွန်အံသြစေသည်။ မိမိ၏ကျောင်းစိမ်းစကတ်လေးကိုဝတ်ဆင်၍ကိုမျိုးကဂွင်းတိုက်နေရာဇင်မာတစ်ယောက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ကိုမျိုး အဲဒါဘာလုပ်နေတာလဲဟင် မမဇင်မာကိုမျိုးသည်မမျှော်လင့်ပဲဇင်မာကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသဖြင့်အပေါ်သို.လှန်တင်ထားသောကျောင်းစိမ်းစကတ်လေးကိုအောက်သို.ချလိုက်လေသည်။ဟို မမ ကျွန်တော် ---- ကျွန်တော်တော်ပါ ဘာမ မပြောနဲ.တော့ ၊ ဘာလို.စကတ်လေးဝတ်ပြီးလုပ်ရတာလဲ။မမ စကတ်လေးကပါးပါးပျော့ပျော့လေးဆိုတော့ ၀တ်ကြည့်မိတာပါ။ မမစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ထားတာကိုမှန်းပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်လို.ပါဇင်မာသည်ကိုမျိုးကိုကြည့်ရင်းရီချင်လာသည်။မိမိစကတ်လေးကိုဝတ်ထားသောကောင်လေးကိုချစ်လာသောစိတ်များလည်းဖြစ်လာသည်။ကဲ ကိုမျိုး မင်းမတ်တပ်ရပ်လိုက်စမ်းကိုမျိုးကမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ်။လာ မောင်လေး ဒီဘက်နားကိုလာဇင်မာကနေရောင်နောက်ခံကျသောနေရာကို ကိုမျိုးကိုခေါ်လာ၍နေရောင်ကိုကျောပေး၍ရပ်စေလိုက်ပါတယ်။ပါးလွှာသောကျောင်းစိမ်းစကတ်လေးထဲမှကိုမျိုး၏ပေါင်တွေကိုကြည့်ရင်းဇင်မာအသည်းယားလာတယ်။ပေါင်ရင်းနားမှာ စောစောကဂွင်းတိုက်ထားတဲ့ကိုမျိုးရဲ့လီးကပျော့ကျနေပါတယ်။ဇင်မာစိုက်ကြည့်နေမှန်းသိ၍ကိုမျိုးရဲ့လီးကတောင်လာပါတော့တယ်။ဟာ မင်းဟာကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပါလားမမ စကတ်ပါးလေးကိုဝတ်ထားရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထလာပြီမမရယ်မောင်လေး မင်းကိုမမ ဂွင်းတိုက်ပေးမယ်။ဇင်မာကပြောပြောဆိုဆိုစကတ်ပါးလေးထဲမှ တောင်နေသောကိုမျိုးရဲ့လီးကိုဖမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်။လက်နှင့်အသာလေးညှစ်ပေးရင်းအရှေ့အနောက်ဆွဲပေးတယ်။ အား ဇင်မာကကိုမျိုးလီးကိုလက်နှင့်ခပ်တင်းတင်းညှစ်ရင်းစကတ်ပေါ်ကဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။လာ မောင်လေး ဒီနားမှာထိုင်လိုက်--- စိတ်ကိုလျှော့ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ မမ
ဇင်မာက ကတ်ထဲကိုလက်သွင်းလိုက်ရင်းကိုမျိုးလီးကြီးကိုဖမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်။ထို.နောက်လီးကိုစကတ်အပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ ကိုမျိုးလီးကိုလက်နှင့်ဆုပ်ရင်းဂွင်းတိုက်ပေးပါတယ်။အား အ အ----အ မမဇင်မာ အ အကိုမျိုးလီးကမတ်တောင်နေတယ်။ ဇင်မာကအခြားလက်တဘက်ဖြင့်ကိုမျိုးရဲ့ဂွေးဥတွေကိုဆုပ်နယ်လိုက်၊စကတ်ပေါ်ကကိုမျိုးရဲ့ပေါင်တွေကိုဆိတ်ဆွဲလိုက် လုပ်ရင်းကိုမျိုးကို ကာမဆဒ္ဒများပြင်းထန်လာအောင်လုပ်နေတယ်။အား အား မမဇင်မာ အား ကောင်းလိုက်တာ အား မမဇင်မာ တဖြည်းဖြည်းနဲ.မြန်မြန်တိုက်ပေးနေတယ်။ ကိုမျိုးလီးကိုခပ်တင်းတင်းဖမ်းဆုပ်ရင်းဇင်မာမြန်မြန်ကြီးကိုတိုက်ပေးနေတယ်။အား ကိုမျိုး မောင်လေး -----မမဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်--- မမဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ် ----ကောင်းလား မောင်လေး ---ကောင်းတယ်မမ ကောင်းတယ် ---စိတ်ကို စုစည်းထား ပြီးတော့မယ် ပြီးခါနီးပြီ----ဇင်မာလည်းကိုမျိုးဖီးလာစေရန်အဆက်မပြတ်ပြောပေးရင်း လီးကိုလည်းသွက်သွက်ကြီးဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။အား မမ အ စကတ်လေး စကတ်ပါးပါးလေး အ အ အား--မောင်လေး စကတ် စကတ် မမစကတ်လေးနဲ. မမစကတ်လေးနဲ. အား စကတ်ပါးပါးလေး အား-----အား ပြီးတော့မယ် မမရေ ---ကိုမျိုးပြီးခါနီးပြီ ဖြစ်သဖြင့်ဇင်မာ ကအမြန်ဆန်အသွက်လက်ဆုံးဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ရာအား အား အား-----------ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ----ကိုမျိုးလီးမှသုတ်ရည်များပန်းထွက်သွားပြီး ကိုမျိုးပြီးသွားပါတယ်။ ဇင်မာကလည်းကိုမျိုးလီးထဲမှလက်ကျန်သုတ်ရည်များအကုန်အစင်ပန်းထွက်အောင်ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထို.နောက်ပျော့ခွေသွားသောကိုမျိုးကိုဇင်မာဖက်ထားရင်းမေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလား မောင်လေး မမလုပ်ပေးတာကောင်းလား--အရမ်းကောင်းတယ်မမရယ် –ကျွန်တော်လီးရည်တွေအများကြီးထွက်သွားတယ် ၊ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်တာဒီလောက်မကောင်းဘူးဒါပေါ့ မောင်လေးရယ် မမကမင်းကို အရမ်းကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ.လုပ်ပေးတာကိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမကဲပါ မမစကတ်လေးကိုချွတ်လိုက်ပါအုံး---ကိုမျိုးကဇင်မာစကတ်လေးကိုချွတ်လိုက်ပြီးသူ.ပုဆိုးကိုပြန်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ ဇင်မာက အ၀ါရောင်တီရှပ်အကျီလေးနှင့်ရှေ့တွင်ကြယ်သီးကလေးများပါသောချည်သားစကတ်ကားကားလေးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ပျော့အိပါးလှပ်သောပိတ်စလေး နှင့်ချုပ်ထားသောစကတ်လေးဖြစ်ပြီးလျှော်ဖန်များ၍အရောင်ကလေး အနည်းငယ်လွင့်ကာပါးလှပ်လှပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုမျိုးသည်ဇင်မာစကတ်လေးကိုလက်နှင့်ကိုင်တွယ်၍ပွတ်သပ်ကြည့်မိပါတယ်။မမ ကစကတ်လေးတွေပဲ အမြဲဝတ်တယ်နော်--အင်း မမကစကတ်ပွပွလေးတွေကိုအရမ်းသဘောကျတယ်---ပြီးတော့ မမစကတ်လေးတွေက ခပ်ပါးပါးလေးတွေ---ဟိုကျောင်းစိမ်းစကတ်လေးဆိုရင်ပါးလှပ်နေတာပဲ
ဟီဟီ မောင်လေးကသဘောကျတယ်မလား စကတ်ပါးပါးလေးတွေကို –ကြည့် သူဝတ်တောင်ဝတ်ကြည့်ပြီးတော့အင်းပါ သဘောကျတာပေါ့ မမရဲ့ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးကိုဝတ်ကြည့်ချင်နေတာကြာပြီ အခုမှဝတ်ရတာဟုတ်လား -----ဟီဟီအရင်ကမမ၀တ်တာကို ချောင်းကြည့်ပြီးဂွင်းတိုက်တယ်အိုး အိုး သိတ်ဆိုးတဲ့မောင်လေးပဲကွယ်---ဇင်မာသည်ပြောပြောဆိုဆို ကိုမျိုးလီးကို လက်နှင့်ဆုပ်ရင်းငြင်သာစွာဂွင်းတိုက်ပေးပါတော့တယ်။ ကိုမျိုးပုဆိုးခါးပုံစလေးကိုဖြည်ချလိုက်ရင်းကိုမျိုးလီးကိုလက်နှင့်ဖမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပျော့ခွေနေသောလီးကိုမတ်လာအောင်ဆွပေးနေပါတယ်။အား မရတော့ဘူးနဲ.တူတယ်မမရယ် –ခုနကပြီးထားတော့ရအောင်မမလုပ်ပေးမှာပေါ့ကွာ----မင်းမမပြောသလိုလိုက်လုပ်---ဟုတ်ကဲ့မမကဲ မမစကတ်ကြယ်သီးလေးတလုံးကိုဖြုတ်လိုက်စမ်း----အင်း ဟုတ်ပြီ မမစကတ်ထဲကိုမင်းလက်ကလေးသွင်းလိုက်ကိုမျိုးသည်ဇင်မာစေခိုင်းသလိုလိုက်လုပ်နေမိပါတော့တယ်။ဟုတ်ပြီ မမစောက်ဖုတ်လေးကို ကိုင်ထားလိုက်—ဟုတ်ပြီဇင်မာက ပါးစပ်ကလည်းပြောရင်းလက်ကလည်းကိုမျိုးလီးကိုအဆက်မပြတ်ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။အိုး ဒီမှာ မင်းဖီးလာတဲ့မမရဲ့ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ----ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး --ရော့ကိုင်ထား -အား မမဇင်မာ အားအား ကိုမျိုးမောင်လေး လီးတောင်လာပြီ ပါးလွှာတဲ့စကတ်လေး မောင်လေးကြိုက်တဲ့ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးအား မမရဲ့ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး အားမမ ကောင်းတယ်---အ လီးတောင်လာပြီ မမ အား မမရဲ့ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးဇင်မာက ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့်ကိုမျိုးကိုဂွင်းတိုက်ပေးနေရာကိုမျိုးလီးမှာမတ်တောင်လာပါတော့တယ်။ ကိုမျိုးလီးဒစ်ကိုအစွမ်းကုန်ဖြဲပေးလိုက်၊လီးထိပ်ကိုလက်မလေးဖြင့်ပွတ်ပေးလိုက်ဖြင့်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသနေပါတော့တယ်။ ဂွင်းတိုက်ခံနေရသူကိုမျိုးမှာလည်းအရမ်းအရသာရှိနေပြီးပေါင်များပင်တဆတ်ဆတ်တုန်နေပါတော့တယ်။ဇင်မာစကတ်ထဲကိုလက်ထိုးသွင်းထားသောကိုမျိုးမှာလည်းဇင်မာအတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုလက်နှင့်ပွတ်နေပါတယ်။အီး အား မမ အား---မောင်လေး စိတ်ကိုစုစည်းထား မမလုပ်ပေးနေတယ်—မောင်လေးကြိုက်တဲ့စကတ်ပါးပါးလေး--အိုး ငါ့မောင်အားကောင်းနေပြီ ကျောင်းစိမ်းစကတ်လေးကိုခေါင်းမှာစွတ်ထားလိုက်-----ဟုတ်ပြီ အိုး အိုး မမမြန်မြန်လုပ်ပေးနေတယ် အ အ ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေး ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးအား အား မြန်မြန်လုပ်ပေးနေတယ် ---ဇင်မာကပါးစပ်မှပြောလည်းပြောလက်ကလည်းလီးကိုမြန်မြန်ကြီးဂွင်းတိုက်ပေးနေရာအ အ အအ အမမ မမမ မမမ---အား ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ်---ကိုမျိုးပြီးခါနီးပြီဖြစ်၍ဇင်မာကအမြန်ဆုံးဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ရာ---------------အ အ အ အမမ မ မ မ မ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အားအားအား အ-----အား-----ကိုမျိုးလီးထိပ်မှပူနွေးသောလီးရည်များပြစ်ကနဲ ပြစ်ကနဲ နေအောင်ပန်းထွက်ကာပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဇင်မာက ကိုမျီုးလီးကိုပြော့သွားတဲ့အထိလက်နှင့်ငြင်သာစွာဆုပ်ထားပေးပါတယ်။ကောင်းလား မောင်လေး အရည်တွေထွက်တယ် အများကြီးပဲ---ဇင်မာကသူ.လက်မှာပေနေသောလီးရည်များကိုကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.သုတ်လိုက်ရင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်မမရယ်—မမကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်လေအမယ်မင်းကလုပ်တတ်လို.လားမမကပြပေးပေါ့ ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးမှာပေါ့--အင်း ဇင်မာက သူဝတ်ထားတဲ့စကတ်လေးကိုအပေါ်ကိုလှန်တင်လိုက်ရင်းအတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ဇင်မာအတွင်းခံဘောင်းဘီလေးမှာဇင်မာစောက်ပတ်ကထွက်တဲ့အရည်တွေ ရွှဲနေတာကိုတွေ.လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့စောက်မွှေးမဲမဲတွေသန်စွမ်းစွာပေါက်နေတဲ့ဇင်မာစောက်ပတ်လေး၊မို.မို.ဖောင်းဖောင်းစောက်ပတ်အုံကြီးကလိုးချင်စရာ၊ဇင်မာကသူမစောက်ပတ်အုံကြီးကိုသူ.လက်ကလေးနဲ.ဆွပေးနေတယ်။မောင်လေး ကြည့်နေနော် မမလုပ်ပြမယ်---ဇင်မာကလက်ညိုးကလေးဖြင့်စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုထိုးပွတ်နေတယ်။ပြီးတော့စောက်စိဖူးဖူးလေးကိုလက်ညိုးကလေးနဲ.ပွတ်တော့တယ်။အ အ အ အင်း အင်း မောင်လေး အ စကတ်---ဇင်မာပါးစပ်ကငြီးသံလေး မပီမသစကားသံလေးနှင့်အတူ မျက်လုံးလေးလည်းမှေးစင်းလာပါတယ်။ ဖီးတက်လာပြီပေါ့။မမ ဇင်မာ ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမလားဟင်---အင်း မောင်လေး အခုမမပွတ်နေသလိုပွတ်ပေးနော်ကိုမျိုးကဇင်မာစောက်စိလေးကိုလက်ညိုးကလေးနဲ.ပွတ်တော့တယ်။ ခပ်ပြင်းပြင်းလေးကိုပွတ်ပေးတယ်။အ အမမ အ မောင်လေး စကတ် စကတ် ပါးပါး ပါး အား အ အအ အစကတ် အီး---ကိုမျိုးကဇင်မာစောက်စိကိုပွတ်ပေးနေရင်းလက်ခလယ်ကိုဇင်မာစောက်ပတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်တယ်။အိုး မောင်လေး လက်မသွင်းနဲ.--မမအောင့်ခံ ခဏလေး ကောင်းသွားမယ်--ကိုမျိုးကလက်ခလယ်ကိုခပ်သွက်သွက်လေးအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးတယ်----အ အ အ ဇင်မာစောက်ပတ်ကိုလက်နှင့်လိုးပေးတဲ့အရသာကိုခံစားရင်းဖီးတက်လာပါတယ်။မမ မမ စကတ်ပါးပါးလေးနဲ. မမကစကတ်ပါးပါးလေးတွေဝတ်တယ်၊ စကတ်ပါးပါးလေး အ အ အ အီး လုပ်ပေးနေပြီစကတ်ပါးပါးလေးနဲ.မမကိုလုပ်ပေးနေပြီ အ အအ အ မမ အရမ်းကောင်းနေပြီ ဖီးတက်လာပြီ အ အ အ မမစကတ်ပါးပါးလေးနဲ. အီး စ----ကတ်----ပါး----လေး----မမ မမ အား အ ကိုမျိုးလုပ်ပါ လုပ်ပါ မရပ်နဲ. မမကောင်းနေပြီ စကတ်ပါးပါးလေးနဲ.မမစကတ်ပါးပါးလေးတွေဝတ်တယ် အ အ အမမစကတ်ပါးပါးလေးတွေဝတ်တယ် စကတ်ပါးပါးလေးတွေကြိုက်တယ် စကတ်ပါးပါးလေးတွေကြိုက်တယ် အ အ အီးစကတ်ပါးပါးလေးဝတ်ပြီးလုပ်နေတယ် အ အ ကိုမျိုး အား မရပ်နဲ. မရပ်နဲ. အ အ အ မမစကတ်ပါးပါးလေးတွေဝတ်အ အ အ အ စကတ်ပါးပါးလေးတွေကြိုက်တယ် စကတ် စကတ် အား အား စကတ် အား အား မောင်လေး အ အပါးလွှာတဲ့စကတ်လေး စကတ်ပါးပါးလွှာလွှာလေး ပါးလွှာတဲ့စကတ်လေး စကတ်ပါးပါးလွှာလွှာလေး အ အ အီးပြီးတော့မယ် အ အ ပြီးတော့မယ် အ အ မမစကတ်ပါးပါးလေးတွေဝတ်တယ် စကတ်ပါးပါးလွှာလွှာလေး အပါးလွှာတဲ့စကတ်လေး စကတ်ပါးပါးလွှာလွှာလေး ပါးလွှာတဲ့စကတ်လေး စကတ်ပါးပါးလွှာလွှာလေးပါးလွှာတဲ့စကတ်လေး စကတ်ပါးပါးလွှာလွှာလေး အား အား မောင်လေး------------------------အား------------------------မြန်---------မြန်----------------------အီး အ အ စကတ်ပါးပါးလေးတွေကြိုက်တယ်စကတ်ပါးပါးလေးတွေကြိုက်တယ် အ အ အီး ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အ အ အ အင်း----------------------အင်း-------------အင်း------------ဇင်မာသည်တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်းစောက်ပတ်ထဲမှစောက်ရည်များထွက်ကုန်ပါတော့တယ်။ကိုမျိုးကဇင်မာစောက်ရည်များ အကုန်ထွက်စေရန်ဆက်လက်၍လုပ်ပေးနေတယ်။
အ အင်း အင်း ရပြီ ရပြီ မောင်လေး မမပြီးသွားပြီ--ဇင်မာစောက်ပတ်ထဲမှကိုမျိုးလက်ကိုထုတ်လိုက်ရာဇင်မာစောက်ရည်များစီးကျလာတယ်။ ဇင်မာကထွက်ကျလာသောစောက်ရည်များကိုဝတ်ဆင်ထားသောစကတ်လေးနှင့်သုတ်လိုက်ပြီးအမောဖြေနေပါတယ်။ကောင်းလားဟင် မမအရမ်းကောင်းတယ်မောင်လေး ရယ်မမကစကတ်ပါးပါးလေးတွေကြိုက်တယ်နော် ဘာလို.လဲဟင်မမ ကလွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့စကတ်လေးတွေကိုကြိုက်တာ ၀တ်လို.ကောင်းလို.လေ စကတ်ပါးလေးတွေဝတ်ရတာအရမ်းမိုက်တယ်လေကိုမျိုးကဇင်မာရဲ့ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးကို လက်နှင့်ပွတ်သတ်ကိုင်တွယ်နေရင်းမှဒီကျောင်းစိမ်းစကတ်လေးကပါးပါးလေးနော်အင်း ဒါမမ အလယ်တန်းတုန်းကစကတ်လေးပေါ့---မမ စကတ်လေးကအရမ်းပါးလျှလွန်းတော့မမပေါင်တွေကိုနေရောင်နဲ.ဆိုရင်ထင်းနေအောင်မြင်ရတယ်ဗျ-မမအဲဒီလိုဝတ်တာနဲ.ကျွန်တော်မှာစိတ်ထပြီးဂွင်းခဏခဏတိုက်မိတယ်ကိုမျိုးစကားကြောင့်ဇင်မာသဘောကျစွာရယ်မောလိုက်ပြီးတော်တော်ဆိုးတဲ့မောင်လေးပဲနော်—ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း ----ကိုမျိုးလက်ထဲမှသူမရဲ့ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးလေးကိုယူလိုက်ရင်းမှသွားမယ်မောင်လေး ---နောက်တခါမှလုပ်ကြသေးတာပေါ့နော်မမ နောက်တခါဆိုမောင်လေးတို.လိုးကြမယ်နော်----မမစောက်ပတ်ထဲကိုမောင်လေးလီးထည့်မှာနော်အင်းပါ ဟောဒီမင်းလီး နဲ. ဟောဒီမမစောက်ပတ်တို.လိုးကြမယ်နော်---ကျေနပ်လားမောင်လေးဟုတ်ကဲ့မမဇင်မာဤအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပျက်ပြီး ၂ရက်ခန်.အကြာဇင်မာအိမ်တွင်တစ်ယေက်တည်းရှိနေချိန်တွင်မမငယ်ငယ်နှင့်သူ.ရည်းစားကိုကျော်မိုးတို.ရောက်လာကြပါသည်။ ငယ်ငယ်ကဇင်မာကိုအိမ်နောက်ဖေးဘက်သို.ခေါ်လာရင်းဇင်မာရေ အပြင်မှာ၁နာရီလောက်နေပေးစမ်းပါ ---နော်ဇင်မာလေးငယ်ငယ်ကမျက်လုံးတဖက်မှိတ်ပြရင်းပြောလိုက်ရာဇင်မာသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမငယ်ဇင်မာအပြင်သို.ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သို.သော်တကယ်အပြင်သွားခြင်းကားမဟုတ်ပါ။အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှပတ်၍တိတ်တိတ်ကလေးအိမ်ပေါ်သို.ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်နဲ.ဇင်မာ့အိပ်ခန်းကကပ်လျက်ဖြစ်ရာဇင်မာထရံနားကပ်၍နားစွင့်ထားတယ်။ထရံမှာလက်သန်းလုံးလောက်အပေါက်ကလေးကလည်းရှိရာဇင်မာအထဲကိုချောင်းကြည့်လို.ရပါတယ်။ အထဲတွင်တော့မမငယ်နှင့်ကိုကျော်မိုးတို.မှာနှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်၍အားရပါးရနမ်းနေကြပါတယ်။ မမငယ်ကအ၀ါရောင်ဘလောက်စ်အကျီလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးခါးတွင်သားရေရှုံကြိုးနှင့်အသားပျော့ပျော့စကတ်အရှည်ကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်ရဲ့နို.တွေကိုဘလောက်စ်လေးပေါ်မှဆုပ်ချေပေးနေရင်းလက်တဖက်ကလည်းငယ်ငယ်ရဲ့ပေါင်ကြားထဲကိုထိုးသွင်းနေပါတယ်။ ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်ရဲ့ဘလောက်စ်အကျီလေးကိုချွတ်လိုက်ပြီးဘရာဇီယာပေါ်မှ ငယ်ငယ်ရဲ့နို.တွေကိုဆုပ်နယ်ပေးနေပါတယ်။ ငယ်ငယ်ရဲ့လည်ပင်းသားလေးတွေဗိုက်သားလေးတွေကို နေရာအနှံလိုက်နမ်းပေးနေတယ်။ ဇင်မာ့ရင်တွေခုန်နေမိပါပြီ။ဇင်မာ့လက်တွေကလည်းဇင်မာဝတ်ထားတဲ့ရှပ်အကျီလက်တိုအဖြူလေးပေါ်မှနို.တွေကို
ဆုပ်ချေနေမိပါတယ်။ဇင်မာကချည်သားကြယ်သီးစကတ်လေးကိုဝတ်ထားရာစကတ်လေးပေါ်မှပေါင်တန်တွေကိုပွတ်ကြည့်နေပါသည်။ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်ရဲ့ဘရာဇီယာကိုချွတ်လိုက်ပြီးပြည့်တင်းလှပသောငယ်ငယ်ရဲ့နို.တွေကိုဆုပ်ချေပါတယ်။နို.သီးခေါင်းလေးကိုပါးစပ်နှင့်ငုံပြီးစုပ်ပေးပါတယ်။ကိုကျော်မိုးကမိန်းမကျမ်းကျေသူမို.ငယ်ငယ်ကိုအရသာအမျိုးမျိုးပေးစွမ်းနေပါတော့တယ်။ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်ရဲ့စကတ်လေးကိုချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပေါ်မှငယ်ငယ်ရဲ့စောက်စိလေးကိုချေပေးနေတယ်။အ အ အအင်း အ အိ အိ အ---အ--ငယ်ငယ်လည်းအရမ်းအရသာရှိနေပါတယ်။ဇင်မာအိမ်နေရင်းဝတ်တဲ့စကတ်လေးကိုရှေ့ကြယ်သီးတလုံးဖြုတ်လိုက်မိပါတယ်။စကတ်ထဲလက်သွင်းပြီးဇင်မာစောက်ဖုတ်ကိုအတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပေါ်မှပွတ်သပ်နေပါတယ်။ဇင်မာစောက်ဖုတ်ကခံချင်လွန်းအားကြီးလို.ဖောင်းတင်းနေတယ်။အခန်းတွင်းမှာလည်းကိုကျော်မိုးကသူ.အ၀တ်အစားအားလုံးကိုချွတ်လိုက်ရင်းငယ်ငယ်ရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုပါချွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ငယ်ငယ်စောက်ပတ်ကလေးမှာစောက်မွှေးရေးရေးလေးတွေနဲ.စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကမို.မို.ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်ကာအလိုးခံချင်လွန်းသဖြင့်စောက်ရည်ကြည်ကလေးများစိမ့်ထွက်နေပါတယ်။ ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်စောက်စိလေးကိုလက်နှင့်ပွတ်ချေပေးနေတယ်။အ အ အင်း အင်း အ အ အ အကို အ အ --ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်ကိုပေါင်ကားစေလိုက်ပြီးစောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကိုလျှာနဲ.ယက်ပါတော့တယ်။အ အ အီး အမယ်လေး အ အီး အစ် အစ် အ---ငယ်ငယ်စောက်ပတ်အယက်ခံနေရပြီ။ ဇင်မာလည်းအယက်ခံချင်လိုက်တာ။ အား ငယ်ငယ်တော့အရမ်းကောင်းနေပြီ။ဇင်မာစောက်ပတ်လေးကလည်းအယက်ခံချင်လွန်းသဖြင့်ရွစိတက်နေပါတယ်။ကိုကျော်မိုးကလည်းစောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကိုယက်လိုက် ၊စောက်စိလေးကိုယက်လိုက်ဖြင့်အားရအောင်ကိုယက်နေပါတယ်။အား အား ကောင်းလိုက်တာအကိုရယ် အား ယက်ပါ အ အ အင်း ကောင်းလိုက်တာ အ အငယ်ငယ်ပေါင်ကြီးကာပြီးအားရအောင်ခံစားနေရပါတယ်။ဇင်မာ့လက်တွေလည်းစကတ်ထဲထိုးသွင်းပြီးအားရအောင်လှုပ်ရှားပေးနေတယ်။ဇင်မာစိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲစကတ်ဘာကယ်ချိတ်လေးကိုဖြုတ်ပြီးချွတ်ချလိုက်တယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါချွတ်လိုက်ရင်းလက်ညိုးကိုစောက်ပတ်အကွဲကြောင်းထဲထိုးထည့်ရင်းခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားနေပါတော့တယ်။အကို ထည့်လိုက်ပါတော့ ငယ့်စောက်ဖုတ်ထဲလီးထည့်လိုက်ပါတော့ အအအ ငယ်မနေနိုင်တော့ဘူး အီး အင်း အစ် ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်အပေါ်တက်မှောက်လိုက်ရင်းလီးကိုစောက်ပတ်နှင့်တေ့ပြီးထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းလီးကြီးကိုဝင်အောင်ထိုးသွင်းနေတယ်။အ အမလေး အ အီး အစ်- ငယ်ဝင်နေပြီ ငယ်စောက်ပတ်ထဲကိုကိုလီးသွင်းနေပြီ ၀င်သွားပြီကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်စောက်ပတ်ထဲကိုလီးတ၀က်လောက်သွင်းပြီးလိုးပေးနေတယ်။အ အကို သွင်းလိုက် အဆုံးထိသွင်းလိုက်ပါတော့ အအ အ ငယ်ခံနိုင်ပါပြီ အ အ အ အီး အစ်
ငယ်ငယ်စကားဆုံးသည်နှင့်ကိုကျော်မိုးကလီးကိုအဆုံးထိတအားဆောင့်ချလိုက်ပါတယ်။အား အား အီး အူး အ ကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်ကိုလိုးပေးနေပါပြီ။ငယ် အ အကိုလိုးနေပြီ ငယ့်စောက်ပတ်နဲ.ကိုကို.လီးလိုးနေကြပြီ အား အားလိုး ကိုကို လိုး အား အား အကိုကျော်မိုးကငယ်ငယ်ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလက်ဖြင့်တွန်းပင့်ရင်းစောက်ဖုတ်ထဲကိုလီးနက်နက်ဝင်အောင်လုပ်တယ်။အဆက်မပြတ်လည်းဆောင့်ပေးနေတယ်။အိုး ကျွန်မရင်တွေခုန်လိုက်တာရှင်၊ကျွန်မလည်းကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးလေးဝတ်ပြီးတော့အလိုးခံချင်လိုက်တာ။ အိုး ကျွန်မလက်ကလည်းစောက်ပတ်ထဲကိုခပ်သွက်သွက်အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတယ်။အ အ အ ကောင်းလိုက်တာရှင် အိုး အ အ အအခန်းတွင်းမှာလည်းငယ်ငယ်ကအောက်ကကော့ကော့ပေးရင်း ၊ ကိုကျော်မိုးကအပေါ်ကနေခပ်သွက်သွက်လိုးပေးနေတယ်။မြန်လာပြီ တဖြည်းဖြည်းမြန်လာပြီ လုပ်နေကြတာ။အ အ အကို ငယ်ကောင်းလာပြီ လိုး လိုး အ မရပ်နဲ. မရပ်နဲ. အအ အအား ပြီးတော့မယ် ငယ်ပြီးတော့မယ် အ အ အ -----ပြီး--တော့---မယ် ငယ်ငယ်ပြီးခါနီးသဖြင့်ကိုကျော်မိုးကတအားလိုးပေးလိုက်ရာ----အား ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အ အ အ အစ်ငယ်ငယ်စောက်ပတ်အတွင်းမှစောက်ရည်များထွက်လာပြီး အရမ်းကောင်းသွားပါတော့တယ်။ ကိုကျော်မိုးကနောက်ထပ်အချက်နှစ်ဆယ်လောက်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပေးလိုက်ရင်းသူ.လီးရည်များကိုလည်းငယ်ငယ်စောက်ပတ်ထဲပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အား အ အအ အား ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အား ကောင်းလိုက်တာငယ်ရာ---ဇင်မာလည်းသူတို.ပြီးသွားပြီဖြစ်သဖြင့်ဆက်လက်ကြည့်၍မရတော့ပါ။ သို.သော်ပြင်းထန်လှသောကျွန်မ၏ကာမဆန္ဒများကတားမရတော့ပါ။ ကျွန်မရေချိုးခန်းအတွင်းဝင်၍အကျီနှင့်စကတ်ကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ထို.နောက်ရင်သားအစုံကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ရင်းစောက်စိလေးကိုလည်းညာလက်ဖြင့်ကစားနေပါတယ်။အား အ အ အ အအား အား အင်း အင်း အ--ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲကိုလက်ခလယ်လေးကိုအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကိုကျော်မိုးနှင့်ငယ်ငယ်တို.လိုးကြပုံကိုမှန်းပြီးကျွန်မလက်နှင့်လုပ်နေတယ်။ ငယ်ငယ်နေရာမှာကျွန်မကိုကျွန်မထားပြီးလက်ခလယ်လေးကိုကိုကျော်မိုးလီးအမှတ်ဖြင့်လုပ်နေရတယ်။အ အင်းအ အီး အီး ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ အ အား အား အား---ကျွန်မအရမ်းကောင်းနေပြီ။ လက်ကလည်းစောက်ပတ်ထဲမှာမြန်မြန်ကြီးလုပ်နေတယ်။စိတ်ကိုစုစည်းထားပြီးစောက်ပတ်ထဲမှစောက်ရည်များထွက်စေရန်ကြိုးပမ်းနေတယ်။အ အ ကောင်းလိုက်တာ အ အင်း ပြီးခါနီးပြီ အ အ အား အား-----------ထွက်ပြီ အ--ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲမှစောက်ရည်များပန်းထွက်လာပြီးအရမ်းအရသာရှိသွားပါတော့တယ်။ ကျွန်မလည်းအကျီနှင့်စကတ်ကိုပြန်ဝတ်ပြီးရေချိုးခန်းအတွင်းမှပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်ကိုကျော်မိုးနှင့်ငယ်ငယ်တို.အ၀တ်အစားအပြည့်အစုံနှင့်ထိုင်နေကြသည်။ ငယ်ငယ်ကပြုံး၍ဇင်မာ ရေချိုးနေတာလား-- မမတို.ပြန်တော့မလို.---ကိုကျော်မိုးကဇင်မာစကတ်ကိုကြည့်နေတာကိုဇင်မာသတိထားမိပါတယ်။ ဇင်မာမိမိစကတ်ကိုငုံကြည့်လိုက်မိတယ်။အိုး စကတ်ရှေ့ကကြယ်သီးလေးကိုတပ်ဖို.မေ့နေတာကိုး။ ကိုကျော်မိုးကတော့ပြုံးနေတယ်။
သူကသဘောပေါက်လိုက်ပြီကိုး။သူတို.နှစ်ယောက်ဇတ်လမ်းကတော့မကြာခင်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုကျော်မိုးအတတ်သိလိုက်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်ခန်.ကြာသော်ကိုမျိုးသည်သူ.အခန်းရှေ့တွင်ထိုင်၍စာဖတ်နေတယ်။ ဇင်မာကဘလောက်စ်အကျီအဖြူကလေးနှင့်ကျောင်းစိမ်းစကတ်ပါးပါးကလေးကိုဝတ်ဆင်ကာ..ဟိတ် ကိုမျိုး ဒီမှာကြည့်စမ်းဟင် မမဇင်မာ--ဒီဘက်ကိုလာခဲ့ပါလားမောင်လေးကိုမျိုးသည်ဇင်မာအခန်းဘက်သို.ကူးလာခဲ.သည်။ ဇင်မာကကိုမျိုးလက်ကိုဆွဲ၍မိမိအခန်းဆီသို.ခေါ်လာခဲ့လေသည်။မောင်လေး မမတို.ချစ်ရအောင်နော်--မမ ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လှန်လိုက် မမစောက်ပတ်ကိုကျွန်တော်ယက်ပေးမယ်မမကိုမျိုးကဇင်မာစကတ်ကိုဆွဲလှန်လိုက်ရင်းဇင်မာဝတ်ထားတဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဇင်မာစောက်မွှေးတွေကိုလက်နှင့်ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေပါတယ်။ဇင်မာကမိမိလက်ဖြင့်ဘလောက်စ်နှိပ်သီးကလေးများကိုဖြုတ်လိုက်ရင်းဘရာဇီယာလေးကိုပါအပေါ်ကိုပင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဇင်မာရဲ့ပြည့်ဖြိုးတဲ့နို.လေးတွေကိုကိုမျိုးကလက်နှင့်ဆုပ်နယ်ပေးနေတယ်။ ညှစ်ပေးနေတယ်။ကိုမျိုးကဇင်မာပေါင်ကိုအပေါ်သို.တွန်းပင့်လိုက်ရင်းစောက်ပတ်ကိုလျှာနဲ.ယက်ပေးနေတယ်။ ဇင်မာ ဖီးတက်လာနေပါပြီ------------------အ အ အ အား အင်း အင်း အင်း---ဇင်မာတယောက်တော့ဖြင့်ကာမဆန္ဒများဖြင့်မွတ်သိတ်နေဆဲ(မြန်မာအချစ်ပုံပြင်ဖတ်သူများရှင့် ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုပါကဆက်ရေးပါအုံးမည်။ မိန်းကလေးတယေက်ရဲ့စွဲလမ်းမှုနှင့်တောင့်တသောဆန္ဒအရရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဇာတ်လမ်းလေးကိုရေးသားရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိန်းကလေးများ မိမိလက်ဖြင့်ကာမဆန္ဒကိုဖြေဖျောက်နိုင်စေရန်နှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ၀ရစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်----------)ပြီးပါပြီ
Posted by လီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ at 3:11 AM